Recipes index | Kicheni Mapepa
Iyo tabouleh ndeye yakajairwa nzira yechikafu cheArabhu, icho chakatangira muRebhanoni kunyangwe chiri kushandiswawo mune dzimwe nyika senge Siria ...
Tuna tacos pamwe nemadomasi
Nyama nehove zvikafu zviviri zvakakura zvinovhara mikana yakawanda kana muchibika, saka zvinogara zvakanaka kuti ...
Kana kudya kuchifanira kunge kuri kunakidza, kuzviita nekuputira chikafu muchingwa kana chikepe chefajita chinofanirwa kuve kunakidzwa kwakapetwa kaviri. That…
Chicken uye mbatatisi tacos
Tacos chikafu chinowanzoitika kuMexico, asi nhasi taita vhezheni yeSpanish yechikafu chinonaka ichi. Iyo yekubheka ine hutano kubva ...
Tahina, inofanirwa muLebanon chikafu
Tiri kuenda nhasi iine yakakosha recipe mukati meLebanese chikafu. Tahini kana tahina isameame paste inoshandiswa sekupararira ...
Gungwa bream tajine nemiriwo
Zvisungo: 1kg yemugungwa bream 1 zucchini 2 turnips 4 madomasi 3 mbatatisi iri pakati 1 hanyanisi 4 gariki clove 2 mhiripiri tsvuku yakagochwa 1…
Iwo maTajines ndeimwe yemidziyo inozivikanwa kwazvo yekuMoroccan chikafu uye pakati pawo anomira ndimu yehuku tagine, iyo tagine ...
Chicken tagine nekumini
Iwe unofarira chikafu cheArabhu here? Kana zvirizvo, iwe une rombo rakanaka, nekuti nhasi ndinokuunzira tagine inonaka kwazvo iri nyore kwazvo kugadzira. Tajine ...
Chicken tagine nemaorivhi, echinyakare chiArabic recipe
Ndiri pano zvakare asi rwendo rwuno ndinouya neresipi kubva kune imwe nzvimbo yepasi. Isu tatoona dzimwe nguva kuti chii ...
Kubika mu tajine kuri nyore uye kunogamuchira chero chinhu chinogadzirwa, kazhinji vanowanzove nenyama kana hove, asi panguva ino ndinokuunzira iyo iyo ...
Zvisungo: 1 hanyanisi 1 clove yegariki 2 mashanga e celery 1 kapu yematomatisi yakakangwa chaiyo 1 teaspoon ye oregano 1 punipuni yetirairi ...
Noodles ane eels nekirimu
Handizive zvaunofunga, asi kwandiri eels zvinonaka uye zvakatonyanya kana iwe uchigona kuzvisanganisa neodles nekirimu. The recipe…
Noodles mu pepper muto
Pasita chikafu chakanaka chemuviri wedu, sezvo iine kukosha kudiki kwekoriori. Zvisinei, kudya pasta chete kunogona kunge kunofinha. Zvakanaka…
Muvhiki ino takasarudza kubika zvikafu zvakajairwa zveMexico. Zvichida vazhinji uye vazhinji venyu makajaira kudya zvakajairwa "Mexico" fajitas kubva kuOldel Paso, yakavhenganiswa ne ...
Mushroom Tapa neZizi Zai
Anoda kuziva tapas anogara achitaridzika zvakanaka. Kwekutanga patafura kuri kuramba kuchikosheswa, chinhu chakakosha kuziva kuti zvakare ...
Mbatatisi, tuna uye cucumber tapa
Tapas, sandwiches, montaditos uye pinchos ndizvo zvimwe zvezvinhu zvakajairika zveMediterranean neSpain zvakajairika, ndosaka zvakajairika kuona ...
Nyowani nyanya uye cheese tapa
Tinoenderera mberi nemabikirwo ane madomasi, panguva ino ndinokuunzira tapa nyowani uye yechirimo iyo yatichangoda chete zvigadzirwa zviviri, ...
Nhasi tichagadzira mamwe howa hwehowa netahisi, asi isina hozhwa. Ndokunge, isu tichavagadzirira sekunge isu tinoaisa uye kana iwe uchivafarira, ivo vanozo ...
Green maorivhi tapenade
Iyo tapenade hapana chimwe kunze kwekuparadzira pasita kunoenderana nemaorivhi, algaparras uye anchovies kugadzirira zvinonaka zvinofadza zvemazuva akakosha senge ...
Mapaini akaiswa mupunga uye karoti gratin
Sezvo Zhizha rinokosheswa riri kutisiya, tinofanirwa kuramba tichizvitarisira isu sepakutanga. Naizvozvo, isu tinofanirwa kuramba tichichengeta mutsara pamwe nechikafu ...
Yakakamirwa uye au gratin matepi
Tapin kana chena zucchini chimwe chezvandinoda zvekudya nekuti zvine mvura yakawanda uye zvine mutsindo. Ini ndinogona kuzviita mu purees, kuzadza, ...
Chicken uye turkey taquitos nemiriwo uye bhekoni
Chii chekuita kana iwe uine imwe nyama asi panguva imwechete iwe uchida kana uchida kudya mimwe miriwo? Zvakanaka, musanganiswa wakakwana wezvose ...
3 Chocolate Keke
Iwo matatu echokoreti keke ndeimwe yeakakurumbira mabikirwo emadhiri nhasi. Ndiani asati azviita kumba? ...
Keke yeGerman soseji
Sausage ndeimwe yezvinodikanwa zvekudya zvevana, saka, nhasi tinofunga kuzvibika neimwe nzira. Inoperekedzwa nechena ...
Keke nekocoa kirimu uye Maple Sirasi
Nhasi tinogadzira keke necocoa cream uye Maple Syrup, yakafuma chokoreti keke iyo iri chokwadi yekufarirwa nemunhu wese. Akaperekedzwa ...
Tart pamwe nzungu
Svondo rino tichagadzirira keke risinganetsi rinonaka, keke rine nzungu. Kunakidzwa kugadzirira pamwe nekofi. The…
Microwave cheesecake, keke, yakapusa nyore uye nekukurumidza. Muzhizha iwe hausi kunyatsoda kubatidza ovhoni, asi iwe unoda chidimbu ...
Pie ne pecorino chizi
Pie ine pecorino chizi, keke rine yakawanda yekuravira. Musiyano wekunaka kwakanyanya kwechizi nekutapira kweiyo caramel inoita kuti ive ...
Iyo keke yeamondi kana tarta de Santiago, idhisheni yechinyakare yeGalician chikafu. Iyo yekubheka ine kunyanya maamondi, shuga uye ...
Sponge keke uye michero
Zvisungo: 200g yeupfu 250g yeshuga 2 mashupuni embiriso 1 punipuni yetirairi 10 mazai 1 gaba hombe repichisi musirasi 5…
Cantimpalo, chizi, tomato uye basil keke
Iyi yekubheka inonaka kwazvo, yakapusa uye yakanaka kuisa pamwechete nevana mangwanani anonaya, iwe unogona zvakare kuaperekedza nesaladi kana mbatatisi ...
Scallion nebhekoni tart
Zvinosanganisa: 2 Tart chifukidzo Yakaputa bhekoni Creamy chizi Grated chizi Green hanyanisi mazai matatu Munyu uye mhiripiri kuravira Kugadzirira: Isa chivharo chekutanga ...
Hanyanisi, celery, madomasi, cherry uye cheese tart
Iri keke rakanakira kana iwe uine nguva shoma mukicheni uye unogona kuiperekedza nesaradhi yemashizha senge chero mhando ye ...
Chikafu chisina chokoreti keke
Kumba, chero dhizeti ine chokoreti ibudiriro yakavimbiswa. Iyi keke yechokoreti, zvingaite sei neimwe nzira, yakada zvakawanda ...
Chokoreti uye caramel keke
Takatanga vhiki yevhiki nekugadzirira dhizeti dhizeti. Hatidi kuti iwe usiye tsika dzako dzakagwinya, asi hongu, tinoda kuti uve nechikumbiro chinotapira ne ...
Chokeke Keke Uye Cookies
Nhasi tiri kuzogadzira chokoreti keke uye makuki. Keke rakareruka risina hovhoni, rakanakira vanoda chokoreti. Keke rakareruka ...
Chokoreti nebhanana keke
Chokoreti uye keke rebhanana, keke rinonaka, rakareruka kugadzirira risingade huni. Keke rine michero, musanganiswa webhanana nechokoreti ...
Chokoreti keke uye profiteroles
Chokoreti keke rakazadzwa neproferoeroles, keke rinonakidza kune vanoda chokoreti uye neproferoeroles, mutsauko wekrimu uye ...
Kirimu keke, inonaka kirimu keke yakasungwa neshuga yakashambiswa, yakafanana chaizvo neCatalan cream, chete ne ...
Keke rekuzvarwa nekeke rechingwa uye chokoreti
Mhoroi vasikana! Rimwe zuva takava nemabiko ekuzvarwa kumba, saka ndakatanga kugadzira keke rekuzvarwa, uye ndakafunga ...
Biscuit uye chokoreti flan keke
Biscuit uye chokoreti flan keke, inoyevedza keke, yakapusa kugadzirira uye izvo zvinonaka. Dzimwe nguva isu tine usimbe kugadzira makeke, zvinoita kunge ...
Kana isu tichitaura nezvemastrawberry, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa kuenda navo nekirimu, kunyange paine zvimwe zvakawanda sarudzo yekuzvigadzirira. Nzira yedu yanhasi, ...
Strawberry uye puff pastry keke mumaminitsi makumi matatu
Strawberries chikafu chiri chaizvo mumwaka panguva ino. Ichi chibereko chakachinjika, chinogona kugadzirwa kubva nyore dhizeti, kuenda ...
Iyo tart yemichero ndeye inokurumidza uye inobatsira dhizeti kune kupera kwevhiki kwatinogona kushanya tisingatarisiri. Zvakare, ne ...
Keke yekuki yaambuya
Keke yekukuru yaambuya ndiyo inogona kunge inozivikanwa kwazvo pasi. Izvo zviri nyore kugadzirira uye panguva imwechete zvinonaka kudaro, ...
Cookie keke, iyo yechinyakare (isina hovhoni)
Isu tese takambo gadzira kana kudya keke rekuki, iyo yakasarudzika uye isingakanganisi ye chero yevana snack inogadzirwa munguva ...
Cookie, mocha uye chokoreti keke
Iri bhisikiti, mocha uye chokoreti keke rakabatana neiro remhuri yangu uye ndinofungidzira iro revamwe vazhinji. Kwenguva yakareba ine ...
Puff pastry keke neapuro
Puff pastry keke neapuro, imwe yemakeke echinyakare eedu gastronomy. Iyi puff pastry keke nemaapuro iri nyore uye inokurumidza ku ...
Mapfupa agara ari akapfuma uye anonaka chokoreti bhawa yevana. Vakazadzwa nechokoreti uye wafer ivo vanonakidza vana ...
Hamu nekeke keke
Ini ndinokupa iwe yakapfuma uye ine hutano keke yekudya inopisa kana kutonhora, yakanakira chero chiitiko kana kuungana kwemhuri: Zvinongedzo: 1 disc ...
Lemon keke, dhizeti inonaka inogara ichibudirira. Iri keke rinotapira uye rakatsetseka iro rinonzwa zvakanaka kwazvo mushure mekudya kwakanaka, ...
Lemon keke isina hovhoni, keke rinonaka uye nyowani. Keke rakagadzirirwa ipapo uye rakaringana sedhizeti mushure me ...
Nhasi ndinokuunzirai iri muffin keke, dhizeti yechinyakare mumhuri yangu yatange tichiravira kwemakumi emakore. Kutora keke iri zviri nyore kuyeuka ...
Pie yakagadzirirwa pamba
Svondo rapfuura, Kukadzi 1, raive zuva rekuzvarwa kwababa vangu uye, muvakidzani wedu anodiwa Mari, akatishamisa nekeke rino rakanaka ...
Peach tart uye mukaka wakanyungudutswa
Kwevhiki ino ndaida kugadzirira keke rinondiyeuchidza zvakawanda nezvehudiki hwangu, sezvo amai vangu vakazviita mu ...
Zvisungo: 250g yeupfu 1/2 teaspoon yemafuta 150 g yeshuga 130 g yetirafu 1 piniki yemunyu 1…
Nutella uye walnut keke
Keke yeNutella uye walnut, keke rinonaka kune vanoda chokoreti. Keke rine chigadziko chinotonhorera uye rinozadza muto uye ...
Wafer keke uye Nutella
Wafer uye Nutella keke, iri nyore keke kugadzirira, haidi hovhoni uye inonaka, iwe unozoiziva sebhonzo keke, sezvo iri chaizvo ...
Yakagadzirwa Oreo Keke
Iyi vhiki yapfuura ndakashanyira dhorobha kunopemberera zuva rekuzvarwa kwaamai vangu vanodiwa. Uye kushamisika kwake, ndakaona ...
Iwe uchada iyi inonaka yechingwa keke recipe. Iwe haungozozviita kamwe chete, asi iwe uchadzokorora, zvirokwazvo. Ndiyo nzira yakapusa, i ...
Pine nzungu tart
Zvisungo: 200g yeupfu 2 maspuni einotapira chena waini 100g yemapine nzungu 1 ndimu (grated peel) 2 dl yeVanilla essence 30dl ye ...
Leek keke, nyowani chizi uye girini hanyanisi
Ini ndinokupa iwe yakapfuma, inokurumidza uye isingadhuri nzira yekubheka yakanaka kuti uende nayo nehuku yakabikwa. Zvinosanganisira 4 maeeks pasina tipi 1/2 makirogiramu echizi ...
Nhasi ticha gadzira cheesecake mu microwave, dhizeti yakapusa iri nyore kwazvo kugadzirira. Cheesecakes inozivikanwa kwazvo, ivo vanoda ...
Zvimisikidzo zvehombodo base 200 gramu eakakomba María Fontaneda makuki 150 magiramu eboro rakapfaviswa Kwekuzadza mazai mana ½ kilo ...
Cheesecake ne raspberries
Cheesecake ne raspberries, dhizeti iri nyore kwazvo kugadzirira uye inonaka. Chokwadi unoda makeke echingwa, ini ...
Microwave cheesecake nejamu
Microwave cheesecake, yakapfuma uye yakapusa kugadzira, inogadzirirwa munguva pfupi uye pasina kudikanwa kwekusvibisa kwakawanda mukicheni. The…
Cheesecake ne raspberry muto
Tiri kuzogadzira cheesecake yakapfuma ine raspberry muto, inofadza chaiko. Iyi ndeimwe yezvandinoda, inotapira, yakatsetseka uye ...
Nhasi chiki cheki chakareruka, kana isina shuga sezvo ichinzwika kupenya, ine chinotapira kuti iite kuti ive yakareruka. Cheesecakes ndiko kudonha kwangu, ...
Mascarpone cheese keke isina hovhoni
Mascarpone cheese keke isina hovhoni, iri nyore uye inonaka recipe. Cheesecake inofadza uye kana pamusoro peiyo inogona kugadzirwa nekukurumidza uye ...
Cheesecake uye maorivhi
Zvirongedzo 2 makapu ehupfu pastry bundu 300 magiramu emiti yemiorivhi yakasvibirira 300 magiramu emiorivhi matema akasungirirwa 250 magiramu echizi ...
Easy Cheesecake uye Crackers
Ino vhiki ino ndeye madhiri! Nezuro ndakaronga keke rinoshamisa rekarotsi nefurawa yakapereterwa mabhureki enyu kana zvidyiwa. Nhasi,…
Cheese uye keke remoni keke rinonaka rechizi, rakareruka uye rinotapira, zviri nyore kwazvo kugadzira sezvo isu tichingofanira kupwanya ese ...
Strawberry jamu uye cheesecake
A pastry uye dessert recipe inogara ichigamuchirwa, handiti? Uye zvimwe kana zvasvika kune yakapusa recipe, iri nyore kugadzira uye izvo zvisingaiti ...
Cheesecake uye sitirobhu jamu, yakasarudzika dhizeti yeZuva raValentine
Isu tangori mazuva mana zuva reValentine risati rasvika, uye iwe wakatsvaga, seni, zviuru zvemarepeke uye zvipo zvekushamisa mumwe wako. Zvakanaka…
Cheesecake uye caramel muto
Cheesecake uye caramel muto, keke rinonaka. Cheesecake yakapfava uye inotapira, iri nyore kwazvo kugadzirira. Keke yeke ...
Cottage cheese keke neuchi
Cheesecake ini ndinoiona, cheesecake yandinoda. Ini handikwanise kuramba yakanaka keke, ndinoibvuma. Kunyangwe zvichibva ...
Blackberry ricotta keke
Zvisungo: 250g ye ricotta chizi 250g yemabrackberry kana bhuruu bhuruu 3 maspuniamu emuto wemonimu 2dl yemuchero wakasviba 250g yesparizi yechizi ...
Nhasi tichagadzirira yakakosha keke izere neRoquefort chizi. Ungatsunga? Zvisungo: 2 tapas dze pascualina 80 g ye roquefort 60 g bota 1 hanyanisi ...
Salami, chizi uye tart teki
Iyi kamukira yakapfuma kwazvo, yakapusa uye yakanaka kusangana pamwe nerubatsiro rwevakomana, yakanakira kucheka muzvikwere uye kushanda seyakagayiwa kana kuidya ...
Iyo keke yeSantiago inotangira mune yechiGalician chikafu. Naizvozvo, nhasi tinokuratidza iyi yakajairwa uye yechinyakare mabikirwo eedu gastronomy ku ...
Nougat keke, dhizeti inonaka uye yakapusa yatinogona kugadzirira aya mazororo. Yakagadzirirwa neunyoro nougat uye sezvo iri inotapira iri ...
Nougat cake, dhizeti isina ovheni uye izvo zvakanaka kuti isu titore mukana weiyo nougat yatasiya. Keke iri nyore uye rakanaka kwazvo. Ideal...
Chokoreti nougat keke
Nougat haigone kushaikwa mumapati eKisimusi, asi hazvi fanirwe kunge zvakafanana. Kuchinja tiri kuzoshandisa piritsi ...
Yeta yogati uye mahabhurosi
A sitirobheri yogati tart. Tiri mumwaka wemastrawberry, muchero unonaka unonaka, unofarirwa zvikuru uye tinogona zvakare kugadzirira akawanda ...
Yogurt keke nemichero
Keke re yogati rine michero, iro rakareruka nzira, yakajeka uye isina hovhoni, hapana chakaomarara. Dhizeti ine hutano yatinogona kugadzira mune zvakawanda zvinonaka uye ...
Carrot keke ine chizi kutonhora
Makeke maviri echokoreti asina hovhoni
Makokoreti maviri keke isina hovhoni, keke rinonaka uko isu machokoreti tinogona kunakidzwa nekunakidzwa uku. Kunyangwe iwo maviri echokoreti keke richiita senge rinonetsa kwazvo pasina ...
Ndinokuunzirai chimwe chinhu chiri nyore kwazvo, chokwadi chekuti vazhinji venyu muchatozviziva, rinova iro keke reNutella, asi pachinzvimbo chekushandisa zvitete zvakapetwa, ndazviita ...
Kangani katsva keke rekukuvadza rakakuburitsa iwe kubva mudumbu-remagariro dambudziko? Kana iwe ukacherekedza, mune dzakawanda zvekudya, mabiko ekuzvarwa kana kuungana kweshamwari, ...
Microwave Sacher Keke
Microwave Sacher Keke, inokurumidza brownie. Iyo inokurumidza vhezheni yeakakurumbira Austrian chaiwo Sacher keke. Yakanaka kune vanoda ...
Tart sipinashi tart
Savory sipinashi keke, isina puff pastry kana chero bundu bundu. Ngatitangei neyakareruka ndiro. Mapayi anochengetedza anogona ...
Pear uye sinamoni tarte Tatin, dhizeti inonaka
Keke yeTatin keke rakatenderedzwa pasi rakagadzirwa netsaona ku'Hotel Tatin 'muLamotte-Beuvron, France, muna 1889. Keke irimo ...
Puff pastry tart ine medlars nemabhanana
Nhasi ndanga ndichida kugadzira dhizeti inonaka kuti svondo rino itipfuure nekukurumidza. Mazororo ezhizha ari kuuya nekukurumidza uye, ne ...
Howa, ham uye cheese tartlet
Iyo howa, ham uye tartlet tartlet dzandinounza kwauri nhasi dzinogona kukuburitsa mune inopfuura rimwe dambudziko. Vashanyi vasingatarisirwi vanouya kuzodya ...
Cheese tartlets uye ma berries
Nhasi tava kuzogadzira dhizeti yakapusa. Hapana kana chero chinhu chingatadza kufamba kana uchigadzirira idzi chizi tartlet uye ma berries ayo ...
Cheese tartlets uye sitirobhu jam
Ino vhiki yevhiki ini ndanyorera pamwe nemadhiri, aine zvirinani uye zvakaipa mhedzisiro. Aya matartlet echizi aifarirwa ...
Nhasi tinogadzirira mamwe teki yetizi. Makeke echingwa inzira yakanaka yekugadzirira pamabiko, tinogona kuzvigadzirira nenzira dzakawanda uye ...
Avocado tartare uye confit prawns
Iyi ndeimwe yeaya mabikirwo aunogona kuisa mune yako yeKisimusi menyu. Iyo avocado tartare uye confit prawns yandinokuunzira nhasi ...
Zvisungo: 300g yekodhi yekodhi 1 pepuru tsvuku 1 green pepper 1 yero mhiripiri 1 hanyanisi 1 zai chives 2 mbatatisi 1 ndimu Tabasco Oiri ...
Pear uye almond liqueur tartitas
Zvisungo: 250 g yeupfu 60 g ye maarumondi epasi 75 g yeshuga yeacing 175 g yesarufa isina kusvibiswa 2 mazai emazai ...
'Tequeños' muVenezuela uye 'cheese minwe' muColombia. Nhasi tinoyambuka padziva kuti ndikuunzire tudyo takawanda twunosanganisira kuputira kamuti kemucheka chizi ...
Nzombe ine doro, dhishi rakagadzirwa nekukurumidza uye nemhedzisiro yakanaka. Dhishi rakagadzirwa riine muto wakapfuma une howa uye ...
Nzombe ine mhiripiri
Tichagadzirira dhishi rakareruka uye rakazara kwazvo, veal nemhiripiri. Yakagadzirirwa munguva pfupi uye inozivikanwa kwazvo, iyo ...
Vevha mumuto nemuriwo
Vevha mumuto nemuriwo, chikafu chakazara kwazvo uye chakakura kugadzirira sekutanga kana yekutanga kosi. Ichi chikafu chevheiri mumuto ne ...
Nyuchi Yakakoshwa neMushroom uye Peas
Chaicho chinonaka kwavanenge vari chikafu chemombe. Iyo nyama inovaka muviri, ine muto uye zvimwe zvinoshandiswa kuravira Iyi ndiyo nzira yekubika…
Vevha yakakanyiwa nenyama nesipinashi.
Zvisungo: 1 kg yefini yevhairi yevheiri 4 mashupuni emafuta 2 mazai 1 kg yesipinashi 3 maspuniji emafuta 50…
Nzombe, huku uye Mbatatisi muSoy Sauce
Chikafu cheAsia mavambo chinodyiwa zvakanyanya mazuva ese, kana kutengwa kana nekufona kuresitorendi yedu yatinofarira, kunyangwe iwe uchigonawo ...
Chard, beet uye karoti terrine
Iyi yakanaka terrine inokupa iwe mavitamini A, B, B9, B12, C, PP, zinc, calcium, iron phosphorus, magnesium, sarufa, manganese, mhangura, ayodini, arsenic uye sodium, iyo ...
Mbatatisi, chard uye manhanga terrine
Iyi yakasarudzika terrine inokupa iwe mavitamini A, B, B9, B12, calcium, iron phosphorus, magnesium, sarufa, manganese, mhangura, ayodini, arsenic uye sodium, iyo inovhenekesa diuretic laxative ...
Nhasi tinogadzirira salmon terrine muKubika Mapepa. Keke rakapfava iro isu ratinogona kusevha pane toast chingwa sekutanga. Inogona kujekeswa ...
Muriwo timbale nemapatata akasviba uye zai
Nhasi ndanga ndichida kukuunzira iresipi yakapusa asi panguva imwechete chimwe chakasiyana. Izvo ndezve ino yemuriwo timbale ne puree ye ...
Homemade yekudenga bhekoni, yechinyakare inotapira iyo inogadzirirwa nemazai evha neshuga, ichiperekedzwa ne caramel. Bhekoni rekudenga ndi ...
Tofu ine sautéed howa uye mbatatisi yakabikwa
Anenge vhiki rega rega ini ndinokwenenzvera chikamu chefofu tofu ndozoishandisa kugadzira ndiro dzakasiyana kwemazuva maviri akateedzana. Iyo tofu ine ...
Marinated tofu nemiriwo yakabikwa
Kana usati wafunga kuyedza tofu, iyi recipe ye marinated tofu nemiriwo yakabikwa isarudzo yakanaka kuzviita.
Yakabikwa Tomate neWhite Cheese
Kana zhizha rasvika hapana chinhu chiri nani pane kudya zvishoma uye zvine hutano, kuti usaremedza muviri, uyo unotova nezvakakwana ne ...
Madomasi kuna mambokadzi
Madomasi a la Reina inoitwa inoshanda, isingadhuri uye yakasarudzika nzira yevanotanga mukicheni: Zvikamu makumi maviri nezvina zvidimbu zvemadomasi zvisina ganda 24/1 ...
ZVINODZIDZISWA: - 4 madomasi. - 1 bhegi diki reParmesan chizi. - Liquid ruomba. - Basil upfu. - Munyu uye mhiripiri. Maitiro: - Scald ...
Pese panogadzirwa madomasi, tinogara tichida kubvisa pulp, kuisanganisa nechinhu uye kuidzosera mukati. Nekudaro, nhasi iwe ...
Madomasi akaiswa salmon saladi
Mharidzo yedhishi inogona kuchinja zvachose pfungwa yatiinayo nezvayo. Yakareruka salmon saladi yakapfeka nemuto we ...
Saladi yakakanyiwa madomasi
Saladi yakakanyiwa madomasi. Iyo saladhi ndeimwe yemidziyo chaiyo yezhizha, dhishi iro isu ratingaite rakasiyana kwazvo uye isu tinokwanisa kusiya ...
Mazai akazadzwa nezai, akabikwa
Pane mazano anokushamisa nekuda kwekureruka kwavo. Vamwe vanozviitira iwo musanganiswa wemavhenekeri uye vamwe kune kwavo kuratidzwa. Madomasi akaiswa ...
Madomasi akazadzwa nemapundu uye tuna
Hauna chokwadi chekuita pakudya kwemanheru? Nhasi ndinokuunzirai madomasi akazadzwa nemachaka ne tuna, chikafu chiri nyore, chine hutano uye chiri nyore. Iwe unogona zvakare kushandisa iyi recipe kubva ...
Madomasi akazadzwa nemiriwo uye chizi
Zvino zvatava mumwaka wemadomasi tinokuunzira iyi inonaka mabikirwo ematomatisi akazadzwa nemiriwo uye chizi, imwe nzira yekubikisa iyo yausingazogone ...
Chiedza chakazara matomatisi
Iyi iresipi yakapfuma kwazvo, ine hutano uye inonakidza. Zvisungo: 2 madomasi 1 gaba re tuna 1/2 gaba yemoyo yemuchindwe muzvidimbu (kana kutenga ...
Rustic toast yeTurkey, chizi uye sausage yemusi
Zvino sezvo mamiriro ekunze akanaka asvika, zvakajairika kwatiri kuti tidye kumba kana iwe uine tenji kana vheranda rakanaka raunogona kuve nemabheka ...
Yakawanda yakabikwa mbatata shongwe
Munguva pfupi yapfuura, muKubika Mapoka tinokanda huni yakawanda kuti tigadzirire kudya kwedu uye madhiri edu, uye mabikirwo atinopa nhasi nde ...
Yakakangwa madomasi nenyama dzeshongwe
Zvakaoma kune vaenzi, nhengo dzemhuri uye vana vemba kuti vadye muriwo vasina kuratidzira? Nhasi tinopusisa dumbu zvakare kuburikidza ne ...
Sugary uye uchi torrijas, yakakosha Pasika
Svondo rinouya rinouya Svondo Dzvene uye riine madhiri akawanda uye zvakajairika mabikirwo emitambo iyi yechinyakare. Imwe yeanonyanya kudiwa ...
Classic French mbiriso
Torrijas ndiwo dhizeti chaiyo yePasika iyo munhu wese anoziva uye akambodya. Uye ivo vakanaka kwazvo ...
ChiFrench chigunwe neshuga
Torrijas neshuga, dhizeti inowanzoitika yePasika. Nhasi ndinokuunzira recipe ye torrijas sezvo pane zvishoma zvasara zveIsita. Zvino…
ChiFrench chigunwe nechokoreti
ChiFrench chigunwe nechokoreti. Inguva yetorrijas uye pamazuva ano eIsita haugone kuchipotsa, chinotapira chakakurumbira kwazvo chakagadzirirwa ...
Chifrench chechiFrench nemarangi
Torrijas ine orenji, yechinyakare mabikirwo ayo asingakwanise kupotsa mazuva ano ePasika. Kuti ndivaite vakasiyana, ndakavapa kubata kwe ...
Chifrench cheFrench newaini tsvuku
Torrijas newaini tsvuku, inotapira inozivikanwa zvikuru inopedzwa paIsita. Iyo torrijas inosanganisira kutora mukana wechingwa kubva pamazuva mashoma kuti upfuure nepakati ...
Mukaka wakabikwa torrijas
Torrijas ndiyo inotapira quintessential yeSvondo Dzvene muSpain, kunyangwe isiri iyo yega. Izvo zvinotapira zviri nyore kugadzirira izvo ...
Waini inotapira uye uchi torrijas
Pakupedzisira Isita nezvose izvi zvinosanganisira! Kunyangwe iwe uchinamata kana kwete, mumba mako pamazuva aya panofanira kunge paine chinonaka chechiFrench chechi ...
Handifunge kuti ndakanganisa kana ndikati izvozvi torrijas paIsita inotapira iri mudzimba dzese dzeSpanish. Ari…
Diki bhanana French mbiriso
Dessert, chero bedzi zvakagadzirwa, zvisikwa zvepakutanga, zvakagadzirwa nerudo uye izvo zvinotiyeuchidza nezvehucheche hwedu, zvinogara zvakanaka, ndosaka nhasi ...
Chifrench cheFrance chakazara nekirimu
Tiri pano neimwe torrijas, uye kana iyo yechinyakare torrijas yakanaka ... iyo cream-yakazadzwa torrijas inouraya! Mukati me…
Torrijas, yakajairika Carnival recipe
Nhasi ndakuunzira nzira yakapusa kwazvo uye zvechinyakare kuSpain, kunyanya panguva yemwaka weCarnival. Ndezve…
Zvisungo: 2 mazai 1 tbsp yevanilla essence 1 girazi (remvura) yemafuta 375 gramu yeupfu 250 magiramu eshuga Kugadzirira: Isa ...
Cupid keke reZuva raValentine
Zvisungo: 200g yechokoreti mumukombe 200g yetirairi 1 sosi yakaumbwa pamoyo 4 mazai 100g yeshuga 1 teaspoon yezvakakosha zve ...
Cherry keke, kutora mukana wecheri mwaka ini wandinofarira kugadzirira madhiri navo. Iwo makeke anofadza uye kana isu tichiaperekedza iwo nezvibereko ...
Chocolinas keke (chocotorta)
Nhasi ndinokuunzira kamukira yechinhu chisina chekudya, asi chinonaka. Iyo keke yechokoreti, kana inonyatso kuzivikanwa se chocotorta, dhizeti yakanaka kunakidza ...
Makeke eOiri; kufukidza Inés Rosales
Kugadzirira madhiri kumba kunopa kugutsikana kwakapetwa kaviri. Yekutanga kunakidzwa nemaitiro uye kunhuhwirira ...
Pasita ndeimwe yemidziyo inonyanya kudiwa nevana. Uye zvakare, ine huwandu hwakawanda hwezvimiro uye zvinonaka kuitira kuti izvi zvive ...
Tortellini nechizi muto uye howa
Pasita ndeimwe yemidziyo iyo vana vanonyanya kufarira, tinogona kuigadzira nenzira dzakawanda, nemuto, miriwo, ...
ZVINODZIDZISWA: - 6 mazai. - 50 gr. hanyanisi. - 100 gr. yehowa. - 100 gr. yemadomasi. - 1 clove gariki. - ...
Omelette nezvasara noodles
Isu tinowanzo kuve nemaoodles akasara mufiriji yedu uye hatigone kuwana iri nyore nzira yekuishandisa uye nekuda kwechikonzero ichi nhasi iwe ...
Chard uye chizi omelette, yakapusa uye inokurumidza dhishi kugadzira, yakanakira kwekureruka kwemanheru. Ndiro ine muriwo uye iyo kana uchiwedzera ...
Artichoke omelette yakajeka uye yakapfuma kwazvo ndiro. Isu tese tinofarira omelette uye inogara ichitiburitsa mumatambudziko isu tisingazive ...
Artichoke negariki omelette
Artichoke negariki omelette. Kana tichida chimwe chinhu chiri nyore uye chinokurumidza kuita, chinhu chekutanga chinouya mupfungwa kugadzirira omelette, ivo ...
Wakamboedza rice omelette here? Kune akawanda marudzi eomelette, mbatatisi, miriwo, tuna, ham uye chizi, nezvimwe. Asi nhasi…
Pea yakabikwa uye mbatata omelette
Kana iwe uine zvinhu zvakaita pizi, mbatatisi uye mazai akatenderedza, wadii kugadzirira yakasarudzika omelette? Zvisungo: 2 makapu epizi dzakabikwa 2 mbatatisi ...
Yakaderera sodium eggplant omelette
Zvisungo: 1 hombe eggplant 1/2 hombe eiii 1 madomasi 5 mazai Oiri, Provençal huwandu hunodiwa, oregano kana thyme, kuravira Kugadzirira: Muhari, dzokorodza ...
Shiraplant uye leek omelette
Aubergine inonaka uye leek omelette. Ini ndiri mudiwa wemitanda, ndinoida. Vanogona kuve vakagadzirirwa zvakasiyana-siyana, zvekuti zvirokwazvo zvinogona kuitwa ...
Shiraplant uye zucchini omelette
Shiraplant uye zucchini omelette. Iyo yakajeka miriwo omelette, isina mbatatisi uye ine yakawanda yekuravira. Tinotanga nezvakajairwa uyezve netsika dzakanaka. ...
Mbatata inotapira uye chorizo ​​omelette
Nhasi ndinokuunzira yakareruka uye atypical recipe yeakabikwa mbatatisi uye chorizo ​​omelette. Iyi gastronomic trompe loee inoita kunge mbatatari omelette, asi ...
Broccoli uye karoti omelette
Nhasi ndinokuunzira ino inonaka uye ine hutano broccoli uye karoti omelette, imwe nzira yakanaka yechiedza, chine hutano uye chinogutsa chisvusvuro. Asi zvakare, izvi ...
Zucchini uye Edam Cheese Omelette
Omelette chishandiso chakakura kana iwe uchidzoka kumba wakaneta uine zvishoma chishuwo chekutanga kugadzira kudya kwemanheru. Ingovhura ...
Zucchini uye tomato omelette neavocado
Kune mazuva apo munhu anouya kumba anononoka uye aine chishuwo chidiki. Ndipo panobva paita risipi inokurumidza asi ine hutano senge iyi inowana kukosha kwakanyanya. ...
Yakabikwa Nyama Omelette
Chokwadi vamwe venyu kana muchiverenga iyi yekubheka muchandiudza kuti hazviwanzo uye kuti izvi zvinongedzo zvinoita senge zvinobatana zvakanaka. Asi ini ...
Onion uye tuna omelette
Onion uye tuna omelette, yakapusa dhishi ine yakawanda yekuravira. Tortillas inogona kugadzirwa nenhamba isingaverengeke yezvigadzirwa, ini ndinoda kuvaita akasiyana ...
Onion uye eggplant omelette
Omelette ine hanyanisi uye aubergine, yakafuma, yakajeka uye yakanaka kwazvo, iri nyore kugadzirira. Iwo ma tortilla anogona kugadzirirwa nezvose zvatinoda, zviri ...
Onion uye girini mhiripiri omelette
Onion uye girini mhiripiri omelette, inokurumidza uye yakapusa dhishi kugadzirira. Iwo ma tortilla akakodzera pakudya kwemanheru uye kunyanya patinosvika ...
Onion, zucchini uye mbatatisi omelette
Onion, zucchini uye mbatatisi omelette, yakapusa, yakapfuma uye yakapusa kugadzirira dhishi. Mbatatisi tortillas ndeimwe yemapapiro edu anozivikanwa ...
Mushroom omelette ine chives
Pane mazuva atisinganzwe kuda kupinda mukicheni. Saka isu tinotsvaga akareruka uye anokurumidza mapikicha senge howa omelette ine chives. A recipe…
Howa uye howa omelette
Imwe yedzakareruka uye zvakare dzakapfuma nzira dzekugadzirira howa inopwanywa nemazai kana mune omelette fomati. A…
Green asparagus imiriwo inodiwa uye inovengwa nevakawanda, pamwe nekuda kwekunaka kwayo. Asi iwe unoziva mabhenefiti ayo kune iyo ...
Sipinachi omelette negariki
Sipinachi omelette negariki, yakanaka pakudya kwemanheru. dhishi rakareruka, rakapfuma uye rinokurumidza. Omelette idyo yakapusa asi inodiwa kwazvo ...
Musi wa23 takuunzirai ndiro yemaputi, kunyanya kabichi. Zvakanaka nhasi tinokuunzira imwe nzira yekubika kune iyoyo yekutanga ...
Hamu uye chizi omelette
Hamu uye chizi omelette, iri nyore nzira. Isu tinogara tichikurumidza uye kugadzirira omelette iri nyore uye nekukurumidza, asi isu tinogona kuita ...
Hamu uye chizi omelette, mupfumi uye anoshamisa ane muto kwazvo omelette. Tortillas ndeimwe yemapepuru akareruka ekugadzirira, asi nguva dzose ...
Apple uye bhekoni omelette
Nhasi ndiri kuenda "kutyora zai" ndichifarira mabikirwo nemaapuro (anofinha uye nechinhu chisina kunaka chaunongoshandisa kubheka) ...
Isu tinonyatsoda kukuratidzira zvitsva zvigadzirwa mukicheni, zvakapusa gadziriro izvo isu zvatisingawanzo kuona kazhinji kwazvo mukicheni, ...
Potato omelette ine chorizo ​​mince
Potato omelette ine chorizo ​​mince. Iyo yechinyakare mbatatari omelette inobvuma zvakawanda zvakasiyana zvigadzirwa, senge miriwo, tuna, ham, chero sausage kana ...
Chishanu chakafanana nedzimba dzetotilla, kunyanya panguva ino yegore. Inoperekedzwa netomatisi saladhi uye / kana mamwe mapepuru egirini ...
Yakabikwa mbatatisi omelette
Kunyangwe yakanaka yechinyakare mbatatisi omelette yakagadzirwa nehunhu hwemafuta emuorivhi haina kunyanyisa caloric sezvaunofunga, nhasi tinoda ...
Mbatatisi 'tortilla nehanyanisi
Zvichida, isu tiri kutaura nezveimwe yeanonyanya kuzivikanwa gastronomic mapepa kunze kwenyika yedu, iyo mbatatari omelette neonion. Idye se skewer kune ...
Chiedza mbatatisi omelette, sarudzo ine hutano
Iyo mbatatari omelette, imwe yeaya madhishi akajairika kuSpain uye ayo atinoda, asi kana tichifanira kudya isu hatigone ...
Hutano mbatatisi omelette
Kune akawanda maresipi yekubika iyo mbatatari omelette, kana inozivikanwa zvakare seSpanish omelette. Ichi chikafu chetsika kubva mubhuku redu reresipi chine mikana yakawanda kwazvo ...
Mbatata omelette uye zucchini
Iyo mbatatari omelette ndeye yakasarudzika yetsika yedu yegastronomic, inomira kunze kwekunaka kwayo uye nyore kuigadzira, idhiri rinozivikanwa uye ...
Potato omelette uye chorizo
Spanish omelette uye chorizo, yakajairika mbatatisi omelette ichichipa iyo yakati wandei kuravira. Iyo mbatatari omelette inofadza yaunoda ...
Potato uye karoti omelette, zvine hutano
Iyo mbatatari omelette kana Spanish omelette ndiyo nzira yekubudirira muSpain, ine mbatatisi shoma uye mazai mashoma atinogona kugadzira rimwe ...
Omelette ine mhiripiri nehove
Nhasi ndinokurudzira hove omelette uye mhiripiri yakasvibirira, omelette yekushandisa. Tortillas dzinokurumidza kugadzirira uye dzakanakira kugadzirira ...
Banana omelette nesinamoni pakudya kwekuseni
Sezvo ini ndanga ndisina nzira yekugadzirira nhasi, ndafunga kukuratidza imwe yemabiko emangwanani angu mukati mevhiki: banana omelette ...
Leek uye hanyanisi omelette
Nhasi ticha gadzira akapfuma uye muto leek uye hanyanisi omelette. Omelette inyanzvi yekugadzirira munguva pfupi, zvakare ...
Omelette yematata akachekwa ane chorizo ​​uye hanyanisi
Nguva zhinji tine mabikirwo echinyakare atinoda kuchinjisa kuti tiwane mamwe anonaka uye akafanana, senge mbatatisi matanda, ane ...
Tichagadzirira omelette yemuriwo, yakapfuma, yakapusa uye inokurumidza kugadzirira. Iyo tortilla idhishi rechinyakare rinoshandiswa zvakanyanya mukudya kwedu, iri ...
Karoti, celery uye chives omelette
Mhoro wakanaka! Pakupedzisira iChishanu! Isu tinopedza svondo nesarudzo ine hutano patafura, tafura inodzora mukanwa uye yese ...
Spanish omelette, yechinyakare recipe
Mhoroi vasikana! Nhasi ndinokuunzira iro retsika mabikirwo mukati megastronomy yenyika yedu, Spanish omelette. Pasina kupokana, ndeimwe ye ...
French tuna omelette, chisvusvuro chikuru chevadiki
Kugara tichigadzira kudya kwemanheru kana masikati kunotipa kutemwa nemusoro sezvo, pazviitiko zvakawanda, tinopererwa nemazano, kunyanya e ...
Turkey & Cheese French Omelette
Nhasi tava kuzogadzirira French turkey uye chizi omelette, yakanakira kudya kwemanheru. Iyo ham uye chizi French omelette recipe ...
Sausage French Omelette
Dzimwe nguva zvinoitika kwatiri kuti isu hatizive zvekuita pakudya kwemanheru, kunyanya kune vadiki vari mumba. Saka,…
French omelette isina yolks, yakakura pakudzikisa cholesterol
Kana iwe uri kutsvaga kudzikisa cholesterol yako, heino nzira yakagwinya matiri yatinodzvinyirira mazai emazai muFrance omelette. French omelette ...
Iyo howa uye howa soufflé omelette
Ndinoda mabikirwo ekubika; Ini ndinonakidzwa nenzira dzakasiyana dzekubika vakasiyana vabiki. Lorraine Pascal ndomumwe wevandinofarira, pamwe ...
Asparagus omelette, iri nyore uye nyore nzira yekugadzirira. Tortillas akakodzera pakudya kwemanheru. Iwo akareruka uye isu tinogona kuzvigadzirira ne ...
Gorosi tortillas nechizi uye asparagus
Ini handidi kwazvo gorosi tortilla, asi ndinobvuma kuti dzinobatsira kwazvo pakugadzirira kudya kwemanheru zvisina kurongwa. Zvakawanda kwazvo…
Cod uye parsley omelets
Aya macode anonaka neparsley omelette anowanzo kudyiwa kamwe chete pamwedzi pakudya kumba kwangu. Zvikonzero zvacho zviri nyore: zviri ...
Zucchini tortillas akakodzera kuperekedza ndiro dzakawanda, kune zviduku ivo inzira yakanaka yekudya miriwo. Ma tortilla akapfava kwazvo ...
Shrimp omelette, yechinyakare mabikirwo kubva kuCádiz
Imwe yeresipi inondinakidza zvakanyanya uye ndeyechinyakare mudunhu rangu, Cádiz, ma shrimp omelette. Aya ma tortillitas akafanana chaizvo ...
French omelette ndeimwe yemidziyo iyo inonyanya kushandiswa kupa kune vadiki vari mumba ivo vari vadiki. Chii chimwe,…
Iyo nzira yatinokuunzira nhasi ichauya inobatsira sekutanga panguva yekudya kwemasikati uye yekudya kwemasikati. Izvo ndezve shrimp omelette. ...
Zuva reValentine rave pedyo nekona uye kubva ku lasrecetascocina tichave tichikurudzira mamwe mapepeti akareruka uye akareruka, pamwe neanonaka, ...
Tortilla dzakaputirwa nemupunga uye serrano
MaFrench omelets anokurumidza uye nyore kugadzirira, uye anova chikafu chinonaka kwazvo kune vadiki vari mumba. Pasina…
MaPancake eAmerica neuchi hwekudya kwemangwanani
Ini ndanga ndichida kugadzirira iyi yekubheka mapancake kana maAmerican mapekeki kwenguva yakareba, asi yaigara ichidzoserwa kune vamwe kusvika kumagumo e ...
Pancakes ane caramelized apple
Vhiki rino tinokukoka kuti ugadzirire chisvusvuro chakakosha: mapeke Kumba isu hatiwanzo gadzirira iyi mhando yemangwanani asi imwe ...
Banana oat mapancake
Nhasi ndinokuunzira iyi yakapusa, ine hutano uye yakakodzera chikumbiro chemhuri yese. Aya oatmeal uye mabhanana mapani mapake akakwana kune ese emangwanani ...
Oatmeal, bhanana uye cocoa mapeke
Iye zvino sezvo kuiswa kwega kunotibvumidza isu tese kunakidzwa nekuzorora kwekudya kwemangwanani kumba, wadii kugadzira mapancake? Kumba tinotendeukira ku ...
Oatmeal, bhanana uye sinamoni mapancake ane kurohwa chizi
Kudya mapancake aya andinogovana nhasi inzira yakanaka yekutanga svondo. Iyo nzira yekubva kuna @ raquel.bernacer, chiremba wezvekudya-ane hutano ane mabikirwo ...
Broccoli uye karoti mapekeki
Mhando idzi dzemapakeke dzinogadzirirwa kumba kana tiine zvidimbu zvemuriwo mufiriji zvatisingade kukanganisa. Aya mapancake ...
Kokonati mapekeki nechokoreti inopisa
Nhasi ndinokukoka iwe kuti ugadzirire kudya kwemangwanani kunoshamisa. Mamwe makokonati mapancake ane chokoreti anopisa ayo mukuwedzera pakumuka achida kubika ...
Hamu uye cheese mapekeki
Vhiki rino ndinokumbira imwe ham uye cheese mapekekumba andinoperekedza nepico de gallo, yakajairwa dhishi reMexico, chikafu chakanakira ...
Banana pancakes (akakwana brunch)
Ndakanzwa kupera kwevhiki here? Ndakambonzwa mukana wakakwana wekuzvinyudza mukati nekunze? Vadiwa uye vadikani vanoda chikafu chakanaka uye ...
Banana uye oat mapancake
Ini handizive nezvako, asi ini ndinoda kusiyana zvakanyanya kubva pakudya kwemangwanani. Makore mashoma apfuura ini ndaigara ndichidya chikafu chamangwanani chakafanana, asi ikozvino ndinoita shuwa kuti yega ...
Pancakes akaputirwa nenyama
Nhasi ndinokuunzira mapakeke akafukidzwa nenyama, akanakira kudya kwemanheru kusina kurongwa. Ivo vanozivikanwawo nezve burritos, wraps ... Kugadzirira aya ma rolls akanaka, ...
Brandade, aioli uye leek mbiriso
Mushure mekasalmoni uye chizi canapes, ndinokuratidza imwe pfungwa yakawanda yekupedzisa matangi ako paEvha yeGore Idzva kana Zuva reGore Idzva. ...
Saladi mbiriso nemukaka mayonnaise
Iyo saladhi ndeimwe yeaya mabikirwo asingakwanise kupotsa pamatafura ezhizha, kunyangwe mudzimba zhinji inodyiwa mukati me ...
Cream chizi uye yakakangwa tomato mbiriso
Toast inodziya inoita Starter yakakwana panguva ino yegore. Ivo havatibvumidze isu chete kutora mukana kune stale chingwa asiwo zvese izvo zvinongedzo zvine ...
Mbudzi chizi uye tomato jamu mbiriso
Tichitora mukana wemwaka wemadomasi takagadzirira matomati muto nemadomasi kumba, tichitora mukana wezvidimbu zvakakura. Iyo yekupedzisira iwe unogona ...
Kushambadza nechizi nyowani uye sautéed mapeche
Unogona kuva nazvo kwekudya chamangwanani, sechikafu kana sedanho rakareruka. Iyi tositi yechizi nyowani uye sautéed mapichisi andinofunga nhasi ...
Salmon, avocado uye yakabikwa mbiriso yezai
Dzimwe nguva zvinokwana kusanganisa zvinongedzo izvo isu zvatinonyanya kufarira kune mazhinji atinayo mupantry, kunakirwa nehusiku hwekudya kwemanheru. Salmon…
Toast nemaapuro akaiswa sauteed uye walnuts
Pakati pevhiki ndinotora nguva yangu kugadzira chikafu chamangwanani. Ini ndinonakidzwa nemaitiro uye ehe mhedzisiro mhedzisiro, pasina kumhanyisa! Nezuro ndichagadzirira ...
Kushambidza nebhanana rakaputika nesinamoni kwekudya chamangwanani
Kumba takanyatsonakidzwa nemabreakfast break. Kusiyana nezvinoitika mukati mevhiki, tinozviita pasina kukurumidza. Simuka, funga ...
Avocado, tomato uye chikwapu chechi chechi
Iwe unoronga sei mabhureki ako? Unogara uine chikafu chamangwanani chakafanana here? Ini ndinofanira kubvuma kuti kusvikira makore maviri apfuura mabhureki angu ezvokudya aigara akafanana uye akaisirwa: muto we ...
Carnival toast nemvumo yemukaka
Carnival toast, ndiyo nzira yatagara tichidaidza torrijas kumba. Gore rega rega panosvika vhiki yeCarnival tinovagadzirira, ...
Hazelnut, bhanana uye sinamoni cream toast
Bored yekugara uine chikafu chimwe chete chamangwanani? Ndinofanira kureurura kuti kusvika makore maviri apfuura ndakadya chikafu chamangwanani ne otomatiki iri. Nekudaro shanduko mune yangu maitiro ...
Akabikwa mukaka wakanyoroveswa wemukaka, yakakosha yeCarnival
Tichiri muCarnival, uye chii chimwe chinopfuura imwe recipe yeimwe dhizeti inonaka pane kuipemberera. Kune izvi, nhasi ndakuunzira mabikirwo ...
Chifrench cheFrance neplums uye ricotta
Takatanga kupera kwevhiki tichigadzira chisvusvuro "chemadzimambo". Chikafu chamangwanani chisina kugadzirirwa mumaminitsi mashanu, kana gumi nemashanu, asi icho chakakodzera ...
Chifrench cheFrench chine jam inogadzirwa
Akaropafadzwa mabhiriji, marefu kupera kwevhiki uye zororo! Kunyanya kune avo vanoda chikafu chakanaka icho icho nekuda kwekumhanya kwezuva nezuva ...
Chifrench cheFrance ne nutella nebhanana
Tinogona kuvadaidza kuti toriijas, tinogona kuvadaidza kuti French toast ... chinhu chakakosha pamusoro pedhishi iri hachina kunyanya kuputira sekuzadza kwebhanana uye nutella ...
ChiFrench chigunwe nebhanana uye almond cream
Kutora mukana nechingwa chasara kubva pazuva rapfuura kugadzirira mapapiro ekuravira zuva rinotevera itsika yakajairika mudzimba dze ...
Toast ine aubergine, zucchini uye ricotta
Mhoro #zampabloggers! "Usadya chingwa chinokukodza." Vadiwa shamwari ... kuzvitaura sei? Idzodzo inhema! Kudya kwakapfuma muchingwa, kunyanya mune iyo kesi ...
Toast nechizi uye applesauce
Isu tinopfiga svondo neresipi yakapusa iyo inogona kupihwa sekutanga, asiwo kunakirwa dhizeti. Izvi zvinoshambadza ...
Toast yeanchovies muvhiniga, salmorejo uye ham
Zuva rekupedzisira ndakakudzidzisa maitiro ekugadzira iyo inonaka inofadza yeakachekwa anchovies. Zvakanaka, nhasi ndinokuratidza maitiro ekushandisa iyi recipe mu ...
Serrano ham, zai uye chizi toast
Kana iwe uchida kunakidzwa yakanaka pinxto kana tapa, mirira kuyedza idzi ham, zai uye chizi toast. Chingwa chakashambidzwa (tostas) chakasaswa ne ...
Chingwa toast pamwe neham uye chizi uye yakanyongedzwa pamusoro pezai
Chikafu chakanakisa chemanheru neshamwari tapas kana akasiyana ekutanga. Naizvozvo, nhasi ndagadzirira izvi toast ...
Nut chingwa toast pamwe nemadomasi uye Emmental chizi
Pakupera kwevhiki kune vanhu vanozorora mukicheni, asi izvi hazvireve kuti ndiko kudya chikafu chisina basa, asi kudya chikafu ...
Rustic chingwa toast nedhadha foie, tomato uye chizi
Nezuro takakudzidzisa maitiro ekugadzira mbichana mbichana rustic yakachekwa chingwa. Zvakanaka, kuva kumba, hakugare kwenguva refu, kunze kwekunge ...
Mbudzi cheese uye howa toasts
Matoast anodzokororwa sei kugadzira chisvusvuro chemanheru. Uye nezvimwe zvakaita sechizi ichi chembudzi uye mushroom toast zvinobuda ...
Grilled cheese uye mazambiringa toast
NeKisimusi yave padyo, kune vazhinji vedu vari kutopedzisa ruzivo rweiyo menyu. Mukubika Mapoka, sezvatinoita zvese ...
Cheese, pistachio uye matamba matomatisi
Chizi, pistachio uye matamba matomatisi haana chakavanzika; zviri nyore uye zvinokurumidza kugadzira. Kunyangwe zvavo zviri nyore, ivo chikafu chikuru ...
Mbudzi chizi, howa uye sipinachi toast
Iyi yekubheka inogadzirira nekukasira uye ine musanganiswa wakadaro wevhenekeri zvekuti ini handina kuzokwanisa kurega kuigovana. Unogona kuishandira sechinhu chinotapira newaini ...
Tomato, harissa uye maorivhi emafuta
Nhasi tinokurudzira muKitchen Recipes iri nyore uye mwaka wekutanga: tomato toast neharissa nemafuta emuorivhi. Unogona kuigadzirira ne ...
Tomato, ham uye yakanyunguduka chizi toast
Madomasi, madomasi uye machesi akanyungudutswa echizi atinogadzirira nhasi akakwana kushanda sekutanga patinosangana pamwe neshamwari nemhuri kumba. ...
Chinanazi chakapfura nevodka
Ichi chinwiwa chakapfuma kwazvo uye chinoyedza, chakanakira nguva yechando kuchinwa icho pasina chando, chinoita kuti udziirwe, uye zvezhizha nezvakawanda ...
Kunwa kwenguva refu sitirobheri
Zvinowanikwa ma1 / 2 kilo yemastrawberry 2 Maapuro 5 mashupuni eshuga 1 litre yemaspagne 2 makapu echando chakapwanywa Maitiro Geza uye cheka mu ...
Zvisungo: 2 zviyero orenji liqueur 2 zviyero bhurandi 2 zviyero gin Yakapwanywa chando Kugadzirira: Isa chando uye izvo zvinosanganisa mune inozungunusa, uye ...
Puff pastry kuruka nechokoreti uye walnuts
Puff pastry kuruka nechokoreti uye nzungu, chikafu chinonaka che dessert kana kuperekedza kofi. Puff pastry maswiti ari nyore uye ari ...
Puff pastry kuruka, ham uye chizi uye béchamel
Puff pastry idumbu rinotonhorera kana rakabikwa uye rinonyanya kuita basa nekuti rinogona kuzadzwa nechero zvatinoda. Saka,…
Yakanaka kuruka uye mabrioches
Pandakakuunzirai zvidhori zvisina mazai, ndakakuudzai kushatirwa kwandinoita nezvinonaka zvekubika (kana vaine bundu). Kubva panguva iyoyo kusvika nhasi ...
Chokoreti yakazadza kuruka
Yakarukwa izere nechokoreti, yakapusa uye inokurumidza puff pastry inotapira kugadzira. Izvo zvinogara zvakanaka kuve nekukanganisa mbichana kumba, zvinokubvisa iwe nekukurumidza, ...
Rogi rekiki, kirimu uye chokoreti
Kuti tijekese zuva redu iri Chishanu takagadzira dhizeti inonaka nemakeke uye chokoreti. Raki rinonaka remakuki akazadzwa nekirimu ...
Unyengeri hwekucheka nyama kuita cubes
Pamwe muhupenyu hwedu hwezuva nezuva isu hatifunge izvi, asi pane nhambo dzakakosha dzatinoda kupa madhishi edu ...
CHINONYANYA KUSVIRA Girazi REMATERMOMIX
Paunenge uchida kuti girazi riome zvakanyanya, semuenzaniso kugadzira icing shuga, uye isu tangoshandisa nekuichenesa, mhinduro inogona ...
Tichagadzirira mamwe ma truffles. Kune aya mapato akakodzera, ari nyore kugadzira uye mhuri dzedu kana vaenzi vanozovada. Do…
Zvisungo: Mahwendefa maviri ekoshi chokoreti isina mukaka (2gr) 600 piritsi yetireti 1 mazai 5 makapu ekofi, Calisay kana chimwe chinwiwa.
Chokoreti truffles chikafu chinonaka uye chakanakira chero chiitiko. Uye zvakare, iko kugadzirira kuri nyore uye kunokutendera iwe kuti uwedzere akasiyana zvigadzirwa.
Chocolate truffles ine bhurandi, muyedzo chaiwo
Chokoreti truffles ine brandy idhisiki iri nyore kugadzira. Ivo zvakare vanove yakanyanya kunaka chipo yekushamisa iyo ...
Chokoleti truffles ine grated coconut
Kana tichida kugovana sangweji inotapira neshamwari dzedu pakupera kwevhiki, hapana zvirinani pane kugadzirira aya anonaka truffles mumaminetsi mashoma ...
Chokoreti truffles mumatanho matatu
Mmm ... chokoreti truffles, iwo muyedzo kwandiri. Iyi nzira yekubheka chokoreti truffles inobatsira kwazvo kugara uine chimwe chinhu chakagadzirira kana ...
Kokonati truffles, inotapira kwazvo!
Iyi ndeimwe yeaya mabikirwo ayo asingade tsananguro. Zvinongodiwa zviviri chete kugadzira ma coconut truffle aya; unoverenga chaizvo ...
Nyore oat truffles
Nhasi ndinokukurudzira kuti ugadzirire nzira yakapusa yeoatmeal truffles kuitira kuti unakirwe nemhuri yese uye koka shamwari dzako ku ...
Zviri nyore uye nekukurumidza truffles
Anotapira uye anonaka aya ma truffle atinozo gadzira kupemberera chiitiko chakakosha, zuva rekuzvarwa kana tikatambira shamwari, sezvo ichi chiumbirwo ...
Yakatemerwa squid machubhu
Nyama nehove musanganiswa wakanaka, kutangira pane iyi dudziro uye kuti isu tinoida ese ari maviri, tinogona kugadzirira isingaperi nhamba yezvinonaka ...
Ko zvakadii nezvekugadzirira chokoreti yakagadzirirwa uye almond nougat? Iko hakuna chimwe chinopfuura kungogadzirira zvemba zvinotapira kubata. Zvakajairika mune izvi ...
Chokoti nougat nemukaka wakanyoroveswa
Kunakidza pakupera kwesvondo nemhuri uye neshamwari tichagadzirira nzira yakapfava yechokoreti nougat ine mukaka wakasanganiswa wakasanganiswa ...
Crunchy Chokoreti Nougat
Zvino neKisimusi zvakajairika kutenga mantecados, polvorones uye nougats muzvitoro, kugutsa magulas edu pamabiko nemanheru e ...
Chokoreti yekuzvigadzirira uye almond nougat, Kisimusi madhiri 2
Mhoroi vasikana! Sezvaunoziva, Kisimusi iri padhuze nepakona. Chokwadi inopfuura imwe nhengo yemhuri yakubvunza kuti chii ...
Chokoreti nougat uye conguitos
Chokoreti uye conguitos nougat, inonaka inogadzirirwa nougat yatinogona kugadzirira kumba uye kunakirwa nekunakirwa kwekugadzira. Nougat ndeimwe ye ...
Jijona Nougat neRatafia Kuderedza
Sezvazviri zvakajairwa, kunyangwe mazororo apfuura, zvirokwazvo uchine nougat yakasara iyo iri kutamba yakatenderedza kicheni uye iwe hauzive zvakanyanya ...
Turrón de Lacasitos, chinotapira chakajairika pamazororo aya, iyo nougat. Chokoreti nougat haigoni kupotsa, ndiani asingadi? Yes varipo...
Txintxorta, inotapira nguva yechando
Txintxortas inotapira yechinyakare munguva yechando muBasque Nyika. Zvakare mune zvimwe zvikamu zvejogirafi, kwavanosangana nevamwe ...